Polyester blanket, sofa kwushin, polyester akwa mmiri - Longdian
polyester akwa mmiri
Okomoko Travel blanket
Coral ajị anụ blanket na Bag
Cheap ajị anụ blanket Na Bulk
All Season N'èzí Travel Waterproof blanket
2 n'ígwé blanket
Shaoxing Longdian Textile Co., Ltd. bụ a ọrụ mmepụta ihe na trading ụlọ ọrụ, emi odude ke China Textile City-KeQiao Town, Shaoxing, China. Company e guzobere na 2002, edebanyere isi obodo bụ 1,000,000 CNY, nke tumadi na-emepụta na mbupụ ajị anụ na ákwà, ajị anụ blanket, akwa mmiri, picnic blanket, uwe na na. All nke anyị na ngwaahịa ndị soro mba àgwà ụkpụrụ na ekele dị ukwuu maka na a dịgasị iche iche nke dị iche iche na ahịa n'ụwa nile.
Ịzụ a ajị anụ blanket
Nzọụkwụ mbụ ịzụ a oké ajị anụ blanket na-maara otú na ebe ọ ga-eji. N'ezie, blanket na vasatail na ike ga-eji nke fọrọ nke nta ka ọ bụla, ma na nri size na ụdị blanket gị bu n'obi iji ga-hụ na ị na-afọ na gị zụọ. Jụọ onwe gị ...
Adress: RM4028-RM4038, North Seven Mpaghara, China Textile City, KeQiao Town, Shaoxing City, China
Polyester Microfiber Fabric, Flannel Fleece Fabric, Soft Waterproof Coral ajị anụ Fabric , Pv Fleece Fabric,